Yusuf Garaad: Siddeed Qormo Siddeed Maalmood Gudahood
Siddeeddii maalmood ee u dambeeyay waxaan daabacay siddeed qormo oo laba ka mid ahi ay yihiin min laba qeybood. Dhammaantood waxay ku saabsan yihiin xusuusteyda Taliskii militeriga ee dalka ka talinayay October 1969 - January 1991.
Qormooyinkan ujeeddada aan ka leeyahay waa in dhallinyarada Soomaaliyeed ee aan xilligaas soo gaarin aan la wadaago dhacdooyin goos goos ah oo ku saleysan keliya xusuusteyda si ay ra'yi uga helaan sida ay noloshu ahayd.
Qromooyinka aan halkaan ku soo bandhigay ma ahan marnaba in loo qaato in ay isku deyayaan in ay sawir buuxa ka bixiyaan xilligii Kacaanka ama xataa dhacdooyinka aan soo hadal qaaday iyo jilayashooda, oo aan Ilaaheey uga baryayo in uu u wada naxariisto.
Ujeeddada keliya ee aan ka leeyahay waa in aan soo bandhigo sida ay aniga iigu muuqdeen halka dhinac ee aan wax ka eegayay ama aan uga jiray howsha. Kaalinteydu waxay ahayd heer nin aad u dhallinyar, u khibrad yar oo mas'uuliyaddiisu ay kooban tahay.
Ujeeddada labaad ee aan qormooyinkan u soo bandhigay waa in aan ku xadateeyo oo aan ku daandaansado dad aad iiga xog ogaalsan, mas'uuliyad weyn hayay, howlo waaweyn fuliyay ama qeyb ka ahaa ama xog ogaal u ahaa in ay ka caroodaan qormooyinkeyga weyda ah, oo markaas ay soo bandhigaan miidda sheekada.
Sheekooyinkan oo baahi iyo xiisa badan ay akhristayaasheydu ka muujiyeen, waxaan ballanqaadayaa in aan sii wadi doono haddii Rabbi ii oggolaado hadba sida caafimaadka, wakhtiga, waayaha iyo ammaanku ay iigu saamaxaan.
Haddii aanad weli akhrin Siddeedda Qormo qaarkood iyo haddii aad akhrisay laakiin aad jeclaan lahayd in ay hal bog kuugu wada keydansan yihiin ama aad dooneyso in aad mar qura u dirto saaxiib kale, halkan ayaan ku soo wada koobay. Akhris wanaagsan.
Qormada aad dooneyso in aad akhriso, fadlan dul istaag cinwaankeeda oo dhag-sii.
Maalinta koowaad ee aan la KUlmo Madaxweynuhu waxay ahayd Buulo Burte. Waxay ahayd maalin farxad iyo xorriyad buuxda aan ku wada sheekeysannay.
Waa tusaale muujinaya sida Madaxweynaha Soomaaliya loogu hoggaansanaa talooyinkiisa ka hor shilka baabuur ee 1986.
Shil Madaxweyne - Qeybta Koowaad
Waa Qeybta Koowaad ee Qormo aan uga hadlayo raadka shilkii Baabuur ee AUN Madaxweyne Maxamed Siyaad uu ku dhaawacmay.
Waa Qeybta Labaad ahna tan ugu dambeysa Qormo aan uga hadlayo raadka shilkii Baabuur ee AUN Madaxweyne Maxamed Siyaad uu ku dhaawacmay. Maxamed Siyaad Barre wuxuu Golaha Wasiirrada u sheegay in uu carrabku culus yahay jugtii shilka baabuur ka soo gaartay awgeed. Wuxuu sheegay in uu doonayo in uu doonayo in uu nasto. Si ay kuugu fududaato in aad Qyebtan fahamto, fadlan marka hore akhri Qeybta Koowaad.
Waa furitaankii wejiga labaad ee dekedda Kismaayo. Madaxweyne Maxamed Siyaad, Wasiir Muuse Rabbiile iyo Danjiraha Mareykanka Frank Crigler iyo General Adan-Kuukaay oo mid waliba shaqo gooni ah u socdo oo ku kulmay Kismaayo. Dayaarad cillad la kici weyday iyo arrimo kale oo aan ka xusuusto safarkeygii Kismaayo ee 1987.
Waa qormo sawir kooban ka bixineysa hal habeen oo aan ka shaqeynayay Radio Muqdisho 1986.
Waa qiso dhacday 1990 mar la dhisayay Xubnaha Golaha Wasiirrada. Cawke liiska uu Madaxweynaha ka soo qaaday markii uu la tegey idaacadda si uu ugu dhawaaqo ayaa markii wakhtigii taagan yahay waxaa u soo galay weriye kale oo sida isbeddel golaha lagu sameeyay oo ku yiri Madaxweynahaa kugu yiri sidan u beddel.
Cawke muxuu falay? Wasiirrada la is weydaariyay waa kuwee?
Madaxweynuhu markii uu dalka ka dhoofay wuxuu Ku Sime Madaxweyne u magacaabay Maxamed Ibraahim Liiqliiqato. Cabdiraxmaan Jaamac Barre muxuu la damcay Maxamed Cali Samatar?
Waa maxay go'aanka Wasiirka Warfaafintu uu qaatay?
Maxaa ku kallifay Cabdulqaadir Xaaji Maxamed in uu qabto howshii loo xil saaray Maxamed Cumar Jees isaga oo aan wargelin?
Jees muxuu tallaabo qaatay markii uu ka warhelay in shaqadiisii uu qabtay Cabdulqaaddir Xaaji Maxamed?
Posted by Yusuf Garaad at 04:03:00